जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ 🥇 फॉलोअर्स ▷ 🥇
मानिसहरूले यो भनेको सुन्न साधारण छ इन्स्टाग्राम तपाईंले आफ्नो खाता बन्द गर्नुभयो। यद्यपि हामी किन विरलै सोच्न थाल्छौं जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ। सत्य यो हो कि, हामी विश्वास गर्छौं कि हामी इन्स्टाग्राम सही तरीकाले ह्यान्डल गर्छौं, हामी प्राय: यस्तो सामग्री अपलोड गर्छौं कि यदि यसले हामीलाई कुनै हानि गर्दैन जस्तो लाग्छ भने यो सामाजिक नेटवर्कको मापदण्डको बिरूद्ध जान्छ।
वास्तविकता यो हो कि जब हामी कुनै सामाजिक नेटवर्क को उपयोग शुरू गर्दछौं, हाम्रो ध्यान सँधै अन्य व्यक्तिहरूसँग अन्तर्क्रियामा हुन्छ। जे होस्, यो दुर्लभ अवसर हो जब हामीले सामग्रीको प्रकारको अनुसन्धान गर्न समय निकायौं जुन प्रकाशित हुन दिइयो र के होईन। यस लेखको नोट लिनुहोस्, ताकि तपाइँलाई थाहा छ जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ.
इन्स्टाग्रामले कहिले खाता बन्द गर्छ?: प्राय: सामान्य कारणहरू!
प्राय: प्लेटफर्महरू वा कम्पनीहरू जस्तै इन्स्टाग्रामसँग एक सार्वजनिक कागजात छ जुन प्रयोगका सर्तहरू र गोपनीयता गोपनीयता निर्दिष्ट गर्दछ जुन प्रयोगकर्ताहरूले अनुसरण गर्नै पर्दछ। यस कागजातको माध्यमबाट तपाईले सुनिश्चित गर्न सक्नुहुन्छ कि किन र जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ। तपाईंसँग कुनै बहाना छैन!
तैपनि, यो ज्ञात छ कि अधिकांश व्यक्तिहरूले यी सर्तहरू कहिले पढदैनन् जब इन्स्टाग्राम खाता सिर्जना गर्दा। त्यसकारण, यो ढिलो हुनु अघि, आज हामी तपाइँलाई थाहा पाउनको मुख्य कारणहरू ल्याउँदछौं जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ। यी गल्तीहरूको लागि नपार्नुहोस्!
कारण किन इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्‍यो
अर्को, हामी मुख्य सर्तहरू बारे कुरा गर्नेछौं जुन तपाईं माथि उल्लिखित कागजातमा फेला पार्नुहुनेछ। यसले इन्स्टाग्रामको प्रयोगको बारेमा सब भन्दा सान्दर्भिक नियमहरू तोक्छ, जुन प्लेटफर्ममा पंजीकृत प्रत्येक प्रयोगकर्ताले अनुसरण गर्नै पर्छ। यो महत्त्वपूर्ण छ कि तपाइँले त्यसलाई विचार गर्नुहुनेछ जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ, यी नियमहरूको उल्ल to्घनको कारणले हो, त्यसैले निलम्बन तुरून्त र स्थायी रूपमा गर्न सकिन्छ।
Your तपाईंको फोटोहरूको सामग्री
तस्विरहरू प्रकाशन गर्न बिर्सनुहोस् जुनमा हिंसा, न्यूड्स, अवैध, अश्लील वा विभेदकारी कार्यहरू, साथै सुझावात्मक वा अप्रिय फोटोहरू हुन सक्छन्। उल्लंघन को मामला मा, यो आश्चर्यजनक छैन जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ.
· प्रतिलिपि अधिकार
इन्स्टाग्राम प्रयोग गर्दा तपाईले थाहा पाउनु पर्ने पहिलो कुरा तपाईले उत्पन्न गर्नु भएको सबै सामग्री तपाईको सम्पत्ति हुन वा कुनै पनि केसमा उक्त फोटोको लेखकलाई क्रेडिट दिनुपर्दछ। जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ सम्पत्ती अधिकारका कारण, यो यो हो किनकि तपाईंले यस नियमलाई धेरै पटक उल्ल .्घन गर्नुभयो।
· धम्की र मानहानि
अन्य प्रयोगकर्तालाई धम्काउने, सताउने वा डराउने क्रममा टिप्पणीहरू जारी गर्नबाट जोगिनुहोस्। न त तपाईं निजी वा गोप्य जानकारी प्रकाशित गर्न वा प्रकाशित गर्नुपर्दछ जुन तपाईंसँग सम्बन्धित छैन, जस्तै टेलिफोन नम्बर, बैंक विवरण, अन्य बीच।
अर्को व्यक्तिको पहिचानको प्रतिरूपण गर्न खाता बनाउन यो कडाइका साथ निषेधित छ। साथै, यो अर्को प्रयोगकर्तालाई तपाईंको खाता हस्तान्तरण वा बेच्न अनुमति छैन।
यो इन्स्टाग्राममा प्रस्तुत गरिएको सबैभन्दा सामान्य समस्याहरू मध्ये एक हो। अनावश्यक ईमेलहरू, टिप्पणीहरू वा थोकमा मनपर्दो पठाउन बेवास्ता गर्नुहोस्। उही तरिकामा, अप्रासंगिक वा अपमानजनक सामग्री पोस्ट नगर्नुहोस्। यो दिमागमा राख्नुहोस् जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ स्प्याम द्वारा, यो यति निश्चित गर्दछ।
· अवैध प्रयोग
सबै भन्दा सामान्य कारण को लागी जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ हामी ती व्यक्तिहरू भेट्टाउछौं जसले अरूलाई फायर आर्म्स, मदिरा, प्रिस्क्रिप्सन ड्रग्स जस्ता वस्तुहरू बिक्री गर्छन् वा गर्छन्। इन्स्टाग्राममा तपाइँले सेवा अवैध वा अनाधिकृत उद्देश्यहरूको लागि प्रयोग नगर्न सहमत हुनुपर्दछ।
J चोटपटक वा स्वत: हिंसा
यस कोटीले एनोरेक्सिया, बुलिमिया वा आत्म-हानि सम्बन्धी प्रकाशनहरू समावेश गर्दछ। यो नियम भ breaking्ग गरेको खण्डमा, इन्स्टाग्रामले तपाइँको खाता सूचना बिना र स्थायी रूपमा मेटाउनेछ।
इन्स्टाग्रामले कहिले खाता बन्द गर्छ?: आवाश्यक उजुरीहरू
कति चोटि तपाईं इन्स्टाग्राममा व्यक्ति रिपोर्ट गर्न चाहानुहुन्छ तर तपाईंको गुनासो पर्याप्त हुँदैन जस्तो लाग्छ? यो एक प्रश्न हो जुन प्रयोगकर्ताहरू आफैलाई सोध्छन्। कारण इन्स्टाग्रामले प्रतिनिधित्व गर्ने विशाल परिमाण हो। सब भन्दा प्रसिद्ध प्लेटफर्म मध्ये एक भएकोले, हामी सोच्दछौं कि यो केवल हाम्रो गुनासोको साथ पर्याप्त हुनेछैन।
तर सबै कुरा तपाईको सोचाइ भन्दा सजिलो छ। तपाइँ संकेत गरिएको लेखमा हुनुहुन्छ! सत्य यो हो कि तपाइँलाई खाता बन्द गर्न इन्स्टाग्रामको लागि धेरै गुनासोहरू आवश्यक पर्दैन। यो किनभने तिनीहरूको नीति र गोपनीयता अनुसार इन्स्टाग्राम सेटिंग्स गुनासो वा गुनासो को संख्या मा आधारित काम गर्दैन, तर अन्य अधिक महत्वपूर्ण पक्षहरूमा आधारित छ।
गुनासो र खाता बन्द
हामीले अघि उल्लेख गर्यौं, जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ यो तपाईलाई गुनासो गर्ने संख्यामा आधारित छैन। यो याद राख्नु महत्वपूर्ण छ कि इंस्टाग्रामसँग एक आधिकारिक कागजात छ जसले तपाईंको समुदायलाई सबै प्रयोग र गोपनीयता नीतिहरूको बारेमा सूचित गर्दछ जुन यसको प्रयोगकर्ताहरूले पञ्जीकरण गर्दा पछ्याउनुपर्दछ।
जे होस्, उल्लंघनको मामलामा वा जब इन्स्टाग्रामले एक गुनासो प्राप्त गर्दछ, यसले के गर्छ प्रोफाइल विश्लेषण गर्दछ र हेर्नुहोस् यदि यसले प्लेटफर्म प्रयोग गर्ने नीतिमा कुनै उल्लंघन गरेको छ। यदि यो मामला हो र गल्ती गम्भीर छ भने, Instagram स्थायी रूपमा खाता बन्द गर्न पूर्ण स्वतन्त्रता छ।
यद्यपि प्लेटफर्मको उद्देश्य मध्ये एक प्रयोगकर्ता हराउनु हुँदैन। तसर्थ, तिनीहरू यस मुद्दाको बारेमा प्राय: धेरै निष्क्रिय हुन्छन्। सामान्यतया, प्राप्त गुनासोहरू सानो प्रकारका उल्लंघनको हुन्छन्, जसमा इन्स्टाग्रामले यस खातालाई स्थायी रूपमा बन्द गर्नुको सट्टा अस्थायी रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँछ।
यदि प्रोफाइलले धेरै गुनासोहरू प्राप्त गर्दछ भने, इन्स्टाग्रामले समीक्षालाई अधिक गम्भीर रूपमा लिनेछ र प्राथमिकता दिनेछ। यसको मतलब यो होइन कि गुनासोहरूको संख्याले खाता बन्द हुने निर्धारण गर्दछ, यसले मात्र इन्स्टाग्रामलाई केसको रूपमा अझ छिटो पत्ता लगाउँदछ। त्यसकारण जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ यो अपराध द्वारा गरिएको अपराधको गम्भीरताका कारण हो र यो प्रोफाइल द्वारा प्राप्त गुनासोहरूको संख्यामा होईन।
कसरी इंस्टाग्राम खाता बन्द गर्ने बनाउन?
मुख्य कुरा यो जान्नु हो कि इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दैन किनकि व्यक्ति तपाईंलाई मनपर्दैन वा यससँग व्यक्तिगत समस्याहरू छन्। प्लेटफर्म बाहिर देखा पर्न सक्ने इन्स्टाग्रामले खातामा विवाद लिदैन। त्यसकारण जब इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्दछ, इन्फ्रेक्शन यसको गोपनीयता नीतिमा हुनुपर्दछ र अपराध गम्भीर छ।
खाता बन्द गर्नुहोस्: तपाईंले के गर्नुपर्छ?
इन्स्टाग्रामले खाता बन्द गर्नका लागि, तपाईले यो निश्चित गर्नुपर्दछ कि यसले यसको प्रयोग र गोपनीयता नीतिहरू उल्ल .्घन गर्दछ। उही तरीकाले, तपाईले तल वर्णन गरिएको चरणहरूको एक श्रृंखला पूरा गर्नुपर्नेछ:
यो निश्चित गर्नुहोस् कि यसले प्लेटफर्मको नियमहरू उल्ल It्घन गर्दछ: यो आवश्यक छ कि तपाईंले खाताले प्रतिवन्ध गरेको उल्लंघन फेला पार्नुभयो। यो बन्द गर्न इंस्टाग्रामको लागि यो एक मात्र तरीका हो।
सम्बद्ध प्रमाणहरू बटुल्नुहोस्: धेरै उजुरीहरूमा तपाईले संकेत गर्नु पर्छ कि प्रयोगकर्ताले कहाँ इन्क्रेसन प्रतिबद्ध गरेको छ। त्यसकारण, स्क्रीनशट एक राम्रो विकल्प हो; सबै कुरा इन्फ्रेक्शनको प्रकारमा निर्भर हुन्छ।
प्रमाण सम्पादन नगर्नुहोला: तपाईको गुनासो अधिक सुसंगत बनाउन, संशोधित नगर्नुहोस् वा प्रमाण नभएको ठाउँमा प्रमाण दिनुहोस्। सब भन्दा साधारण मध्ये एक कुराकानी सम्पादन गर्ने प्रयोगकर्ताहरू हुन्; इन्स्टाग्रामले तुरून्त नोटिस गर्नेछ।
खाता अक्षम भयो वा निलम्बित: के गर्ने?
सामान्यतया, प्रयोगकर्ताहरूको रूपमा हामी सामान्य रूपमा बिर्सन्छौं कि सबै प्लेटफर्महरूमा उनीहरूको नियम वा प्रयोगको नीति र गोपनीयता हुन्छ। धेरैले तिनीहरूलाई बेवास्ता गर्दछन्, उनीहरूलाई धेरै चोटि बेहोश गरेर उल्लंघन गर्दछ, जसले इन्स्टाग्राममा असंख्य खाताहरू बन्द गरेको छ।
यो हाइलाइट गर्नु महत्त्वपूर्ण छ कि हालसालै इन्स्टाग्रामले गलत खाताहरू बन्द गर्दैछ, तिनीहरूलाई निस्क्रिय पार्दै वा उनीहरूको नियम उल्ल .्घन गर्नेहरूलाई स्वीकृत गर्दैछ। त्यसकारण, यस लेखमा हामी तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने बारे कुरा गर्नेछौं।
यसले तपाइँलाई चासो दिन सक्छ: कसरी एक इन्स्टाग्राम खाता पुन: प्राप्ति गर्ने?
इन्स्टाग्राम सम्पर्क गर्नुहोस्
सामान्यतया, सन्देश पत्ता लगाउँदैन जहाँ तपाईलाई सूचित गरिन्छ कि तपाईको खाता निस्क्रिय पारिएको छ, यो हुन सक्छ लगईन समस्या। त्यहाँ अर्को केस पनि छ जहाँ तपाईं वा अर्को व्यक्तिले तपाईंको खाता मेटाउनुभएको छ, यदि हो भने, यो पासवर्ड रिसेट गर्न सम्भव छैन।
तपाईंसँग उही ईमेलको साथ खाता सिर्जना गर्न विकल्प हुनेछ, तर तपाईंले अर्को प्रयोगकर्तानाम प्रयोग गर्नुपर्नेछ। तलका निर्देशनहरू पालना गर्नुहोस् यदि तपाईं सँग एक छ भने खाता जहाँ तपाई लगइन गर्न सक्नुहुन्न.
अर्को विकल्प भनेको अनुप्रयोगको स्क्रिनमा पहुँच गर्नु हो, जहाँ तपाई लगइन समस्या भएको खण्डमा जानकारी पठाउन सक्नुहुनेछ, कागजातहरू पनि संलग्न गर्न सक्नुहुनेछ। प्लेटफर्मले तपाईंलाई सोध्ने मुख्य डाटा मध्ये एक हुन्: तपाईंको परिचय कागजातको प्रतिलिपि र फोटो, या त पासपोर्ट वा ड्राइभर इजाजतपत्र।
इन्स्टाग्रामबाट मद्दतको लागि सोध्नुहोस्
उही तरीकाले, तपाइँ इन्स्टाग्राममा लग इन गर्ने समस्याहरूको माध्यमबाट समाधान खोज्न सक्षम हुनुहुनेछ। हामी सुझाव दिन्छौं कि तपाईंले अनुरोध गरेको सबै डाटा र जानकारीले यसलाई अंग्रेजीमा पठाउनुहोस्। साथै, तपाईं ट्विटरमा आधिकारिक इन्स्टाग्राम खातामा जान सक्नुहुन्छ र तिनीहरूलाई एक निजी सन्देश मार्फत सम्पर्क गर्नुहोस्।
यद्यपि, जबसम्म इन्स्टाग्रामले सम्पर्क सम्पर्क फेरि सक्रिय गर्दैन, तपाईं मात्र यी निर्देशनहरू पालना गर्न सक्नुहुन्छ। याद गर्नुहोस् कि तपाईं उनीहरूलाई फेसबुक र ट्विटरमा आधिकारिक खाताहरू मार्फत सम्पर्क गर्न कोसिस गर्न सक्नुहुनेछ।